WOWU! Okumangalisayo kwe-5 * Isigcina segolide esine-cinema yasekhaya
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGus
I-Blue Tile Farm Barn yaqala ngo-1750, ibonelela ngendawo yokuhlala etofotofo. Indawo yokuhlala ephambili ixhamla kwi-6m+ yesilingi ephezulu kunye neefestile ezimbini ezinkulu eziphindwe kabini. Umgangatho wekhonkrithi opholisiweyo udibanisa ngokugqibeleleyo kunye nemiqadi yeplanga eveziweyo. Ukudityaniswa kweengcango ze-oki kunye nomgangatho kumagumbi okulala adityaniswe neethayile ze-limestone ezinkulu kumagumbi okuhlambela adibanisa ukwenza isitayile sangoku esingenamthungo. Igadi enkulu yabucala ekhuselekileyo enemibono engophukanga phezu kwentsimi yeehektare ezili-120.
Ikhitshi ekumgangatho ophezulu enezixhobo ze-Siemens ezihlala abantu abali-12, iyunithi yesiqithi enebar yesidlo sakusasa kunye ne-pantry eyongezelelweyo ilungile kwisidlo sakusasa esikhawulezayo ukuya kwisidlo esikhulu sangokuhlwa. Ixhotyiswe kakuhle ngoluhlu olupheleleyo lweeglasi, i-china kunye nempahla.
Isilingi yobude obuphindwe kabini kunye neefestile ezimbini ezikwigumbi lokulala eliphambili elidityaniswe negumbi lokuhlambela elikhulu elinendawo yokuhlambela enendawo yokuhamba ngeshawari libonelela ngobunewunewu obunqabileyo kule ndawo yaseNorfolk. Igumbi lokulala lesibini linebhedi enkulu yenkosi kwaye igumbi lesithathu lilungiswe njengegumbi elinamawele.
Izinyuko ze-oki zikhokelela ukusuka ekhitshini ukuya kwi-mezzanine / umgangatho wokuqala. Le ndawo ilungiselelwe njengendawo yokuhlala yesibini eneebhegi ezine ezinkulu, enye iSmart TV kunye neDVD player. Ukuhamba phambili koku ligumbi lokulala lesine elinebhedi ye-bespoke enoomatrasi abathathu abagcweleyo kwaye ilungele abantwana kunye nabantu abadala.
Kwigumbi lokuhlala lesicwangciso esivulekileyo, iisofa ezimbini ezitofotofo ezinkulu zesikhumba kunye ne-ottoman ehambelanayo zicwangcisiwe ukuze zibonelele ngokumangalisayo kwiifestile ezinkulu kwaye zisingise kwindawo enkulu yokutshisa iinkuni.
Ngaphakathi kwegumbi lokuhlala, isikrini esibubanzi obuyi-3.5m, iprojektha yeHD kunye nesandi esijikelezileyo seDolby 7.1 senza icinema yabucala emangalisayo.
I-3m walnut iphezulu kwitafile yokutyela yanamhlanje inezitulo zokudlela ezithambileyo ezili-10 ezenza indawo efanelekileyo yesidlo sasemini eside kunye nedinala.
Kuyo yonke ishedi kukho inani lemisebenzi yobugcisa yoqobo ekumgangatho ophezulu edityaniswe nenkqubo yokukhanyisa yeLutron kunye nokufudumeza okuphantsi komgangatho ibonelela ngemekobume entle yokuphumla kunye nokuchitha iholide yosapho eyonwabisayo.
Ipropathi ikwilali ezolileyo yasemaphandleni eNorth Norfolk entle, malunga neekhilomitha ezi-4 ukusuka elunxwemeni.
Umnini akahlali kwindawo okanye kufutshane nesiza. Nangona kunjalo iselula yam ihlala ivuliwe. Ugcino lwezindlu lusekelwe kwindawo kakhulu.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$662
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Field Dalling